အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: မောင်တို့ ခေတ်သစ်ယောက်ျားတွေ
Posted by တီချမ်း at 8:36 AM
sweetpeony May 27, 2011 at 9:59 AM
ရှိသေးသပါ့ အရင်ခေတ်ကလို ဒီယောကျာ်းက ဆရာဝန်မို့ အင်ဂျင်နီယာမို့ သူဌေးသားမို့ မိန်းမတွေက ပစ်ယူလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲ.. ဒီမိန်းမက ဆရာဝန်မို့ အင်ဂျင်နီယာမို့ သူဌေးသမီးမို့ ယူလိုက်တာတွေပေါ့...
Rita May 27, 2011 at 10:17 AM
အဲဒါကြောင့် မိန်းမအခွင့်အရေးဘာညာ ဘာညာဆို ကိုယ်က ပျင်းလွန်းလို့ အိပ်နေမယ်ချည်း ပြောတာ။ (အခွင့်အရေးလိုချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာပဲလုပ်မယ်။ သူများတွေပါ ကိုယ်စားမပြုနိုင်ဘူး။ မအားလို့။)
ပြီးတော့ တစ်ယောက်တည်း သဘောနဲ့ဆို မဟာယောက်ျားသားဝါဒီ လို့ ပြောတတ်တဲ့လူမျိုးပဲ ကြိုက်တယ်။
တကယ်တော့ လောကရဲ့သဘောကိုက အလျော်အစားပုံစံချည်းပဲ။ အခွင့်အရေးလိုချင်ရင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးလည်း ခေါင်းပေါ်တင်ရမယ်။ ကျားကျားကျား ဆိုတာတွေ ရှေ့ရောက်လွန်းတော့ လူချင်းတူရင် အခွင့်အရေးပိုရသလို၊ အပြစ်ချင်းတူရင် ပိုကြီးလေးတာပဲမဟုတ်လား။
သဘောထားသေးတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာပဲ စဉ်းစားကြည့်။ ယောက်ျား နဲ့ မိန်းမ ဘယ်ဟာ ပိုရုပ်ပျက်တယ်လို့ သတ်မှတ်ကြလဲ။
ကြွားတယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်မှာလဲ စဉ်းစားကြည့်။ ကြွားတဲ့ ယောက်ျား ပိုသိက္ခာကျတယ်။ လူ ရီစရာဖြစ်တယ်။ အဲဒါ ကျားတွေရထားတဲ့ အခွင့်အရေးကြောင့် ပိနေတဲ့ ဝန်တွေ။
အမြင်ကျယ်တဲ့လူတွေ လှုပ်ရှားကြလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကတော့ အမြင်ကျဉ်းတယ်။ ပျင်းလို့။
နောက်တွေးမိတာ တစ်ခုက ငါဝါဒီတွေဟာ နောက်ထပ် ဘာဝါဒီမှ ဆက်ဖြစ်လို့ မရတော့ဘူး။ ခေါင်းစဉ်ပြောင်းချင်ရင် ငါ ကို အရင်ဖြုတ်မှ။
တီချမ်း May 27, 2011 at 10:22 AM
စကားမစပ် မိန်းမတွေ အူတိုတယ်ပြောပြောနေကြတာလေ တကယ့် တကယ်က ခန္ဒာဗေဒ အရ မိန်းမ တွေ ရဲ့ အူ က ယောက်ျားတွေ ထက် တပေ တိတိ ပိုရှည်တယ်တဲ့ သိလား
Phyo Maw May 27, 2011 at 10:24 AM
ခေနဲ့အမှီလိုက်မှဖြစ်မယ် ဂလိုဆိုရင်တော့ =D
ဟုတ်လိုက်တာ မှန်လိုက်တာ။ အဲတာကြောင့်ကိုး။ မိန်းမတွေချမ်းသာမှ ဖြစ်မယ်။
ဟင်းချက်ပီး တင်ပါ အဲ့ဒါသဘောကျဆုံးပဲ
ခုတလော ဟင်းတွေ မတင်တာကြာပီ
တီချမ်း May 27, 2011 at 11:26 AM
ဟင်းချက်တာတွေ က တင်ဖို့ ရှိပါတယ် ပုံတွေ မတင်ရသေးလို့ပါ
ပုံအရင် တင်ပြီးရင်တော့ စာရေးတာက လွယ်ပါတယ် တင်ပေးပါ့မယ်
စု May 27, 2011 at 11:49 AM
ချစ်ကြည်အေး May 27, 2011 at 4:03 PM
သိပါဘူးအေ အဲလို အနားလဇစ် လုပ်ဖို့ကို...၊ ယောက်ျားတွေ အဲသလို ဖြစ်လာတာ ကျားမ အခွင့်အရေး တန်းတူတာ မတူတာထက် ယောက်ျားတွေ စာပိုတတ်လာလို့ လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ သူတို့ထက် စာပိုတတ်တဲ့ မိန်းမတွေနဲ့တွေ့တော့လည်း ခမျာတွေ ခံကြရရှာတာပါပဲ။ တဦးတယောက်ချင်းစီရဲ့ ထက်မြက်မှုနဲ့လည်း ဆိုင်သေးတယ်။ ဟူးဝဲသပန့် လို့ မေးရလောက်အောင်... မိန်းမဦးဆောင်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်တွေ ရှိလာတာနဲ့အမျှ ယောက်ျားတွေ နောက်တန်းရောက်ကုန်ကြတာတွေလည်း ရှိနေတာ။ အရင်က မိန်းမတွေ လင်ရွေးတဲ့ခေတ်ကနေ ခုခေတ် ယောက်ျားတွေလည်း မယားရွေးနိူင်တဲ့အနေအထား ရောက်လာကြတာ။ ဒီလိုပါပဲ တီချမ်းရယ် ရွေးနိူင်သူက ရွေးကြလိမ့်မပေါ့....
ချစ်ကြည်အေး May 27, 2011 at 4:11 PM
ကျန်သွားတယ် ပြောဖို့...။ ဟိုခေတ်က လူတွေက မိန်းမတွေကို ဂုဏ်သိက္ခာ လုံခြုံမှု ပေးတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့ပါဝါကို သူတို့ ကြေနပ်ကြတယ်။ မာန်တက်ကြတယ်။ ရှေ့ဆောင် ဦးရွက်ပြုရတာကို ကြေနပ်ကြတယ်။ ခုခေတ် ယောက်ျားတချို့မှာ အဲလိုစိတ် မရှိကြတော့ဘူး သက်သာရင် ပြီးရော ဖြစ်လာကြပြီ တီရဲ့....
တီချမ်း May 27, 2011 at 10:05 PM
ဟုတ်တယ်ဒေါ်ချစ် အမှန်တော့ အားလုံးရွေးချယ်မှုပါပဲ
ဒုတိယ ကောမန့်ကလဲ သိပ်မှန်တာပဲ ခုခေတ်ယောက်ျားတွေ က နောက်လိုက် ဖြစ်ဖို့ဆိုလဲ နှစ်ခါ စဉ်းစားစရာမလိုဘူး ဆိုသလိုပါပဲ
တခုပဲ အရင်ကတည်းက ရှိလာတဲ့ (သောက်) သုံးမကျတဲ့ သူတို့ ရဲ့ မဟာယောက်ျား မာန တွေကြောင့် နောက်လိုက်လုပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ တောင် နောက်လိုက်ကောင်းဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်တာဘဲ
အများစုကိုပြောတာပပါ တွေ့ဘူးသလောက်ပေါ့လေ တကယ်ပါ ရှားပဲ ရှားတာလား ကိုယ်ကပဲ တွေ့ရလောက်အောင် ကံမကောင်းသေးတာလား
တီချမ်း May 28, 2011 at 12:55 AM
Hay Mar and Mee Chit like this.
Aye Mie so true
Aye Mie သူ့အ တွက် စာအုပ်စာတမ်းတွေ ရှာ ပြီး လာ ပို့တဲ့ သူ ကို ကိုယ့် အား ကိုယ် ကိုး တဲ. အနေ နဲ. တက် စီ စီး ပြီး ပြန် ပါ တဲ့..ကား ၅ နာ ရီ စီး ရတဲ. ခရီး ကို ပြန် ရ မယ့် သူ ကို ကား ဂိတ် တောင် လိုက် မပို့ချင် တာ လေ..
Addy Chen မအေမီ ကိုကြီး အကြောင်းမပါရင် စကားကိုမပြောတတ်တော့ဘူး
နိုင်ဂန်ဂျား က နေ တကူးတကန့် မှာရတဲ့ ဒုက္ခတွေ ကိုထည့်ပြောအုံးလေ ဟွန့်
phyu May 28, 2011 at 8:10 AM
yr opinion is dam right, i agreed, but to some extend.
တီချမ်း May 29, 2011 at 10:32 PM
Ngwe Lamin, Hay Mar and Mee Chit like this.
Friday at 2:38pm · Like
Friday at 2:42pm · Like
Friday at 4:29pm · Like
ဒီလိုခေတ်သစ်ယောက်ျားတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာဟာ တကယ်တော့ ကိုယ်တို့ ခေတ်သစ်မိ...See More
Addy Chen အေး မိလုံး နင်လဲ ခေတ်သစ် အခြောက်မ လို့မပြောရဘူး တွေးတာခေါ်တာ သိပ်တူတာပဲ ဂရိတ်မိုင်း သင့်ခ် အလိုက်ခ် ပေါ့ ခွိ